Mpanamboatra milina coil, mpamatsy - China Coil Machines Factory
Tattoo Coil Machine 8 fonosana ho an'ny Beginner, mety ho an'ny kitapo ho an'ny vao manomboka
FAMPIHARANA: Na ho an'ny liner na ny shader. Mety amin'ny karazana gripa sy fanjaitra rehetra Famaritana: vita amin'ny firaka zinc, milina fanaovana tombo-kase fampiasana matihanina, afaka mandeha tsara sy haingana. Miaraka amin'ny coil 8 fonosana sy fahombiazana azo antoka, dia mety hiasa mandritra ny 6 ora izy raha tsy misy hafanana. Samy ho an'ny liner sy ny shader. Mety amin'ny karazan-tsoroka sy fanjaitra isan-karazany Ny lohataona dia elastika avo lenta ho an'ny asa maharitra Famaritana: Anaran'ny vokatra: Votoatin'ny fonosan'ny tatoazy: 1pcs x Tattoo Machine: Zinc Allo ...
Masinina mifono haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha ho an'ny Kit ho an'ny Tatoazy Professional
✦ Asa mahery: Mampiasa tariby varahina ny milina fanaovana tombokavatsa, izay manana fitondra mandeha amin'ny herinaratra avo lenta sy azo zahana permeabilité ary kalitao azo antoka. Ny lohataona dia vita amin'ny akora vita amin'ny kalitao avo lenta sy ny fanoherana ny havizanana. Fanombohana ara-dalàna 5V, 7-10v miasa voltage, fihenam-bidy matevina, fanamafisam-peo mahery any aoriana. ✦ Coil roa: ny milina fanaovana tombokavatsa dia vita amin'ny alimina aliminioma avo lenta, nohosorana tanana, tsara tarehy ary azo antoka. Ny bikan'ny vatana dia tena miavaka, ary ny ...
Milina fanaovana tombokavatsa varahina vita amin'ny varahina vita amin'ny varahina CNC
Ny firafitry ny tatoazy amin'ilay milina fanaovana tombokavatsa dia vita amin'ny varahina avo lenta, fanapahana tariby elektroda ary sokitra sokitra ao amin'ny CNC. Ny milina fanaovana tombokavatsa dia ampiasaina amin'ny coil vita tanana 12 (tariby varahina nafarana), fampisehoana avo lenta ho an'ny liner sy Shader. Milina miasa amin'ny tatoazy, Hafaingam-panamiana, tsipika malefaka, mora miloko, mampihena ny fahasimban'ny hoditra. Mifanentana amin'ny karazan-tsoratry ny tatoazy sy fanjaitra amin'ny tatoazy. 【CONTACTS COPAUR madio】 Fitotoana tànana varahina madio, fitsaboana hafanana ambony, maodely tsy manam-paharoa. Varahina madio ...
Masinina MO Premium Tattoo Coil ho an'ny Artista Tatoa matihanina
1. Liner & Shader. Mora ny mitantana sy mifehy. Fifanarahana malalaka Miasa miaraka amin'ny gripa rehetra, fantsona, fanjaitra ary famatsiana herinaratra 6-8V miaraka amin'ny tadin'ny clip. 2. Tabilao milina fanaovana tombokavatsa avo lenta vita amin'ny Carbon Steel miaraka amin'ny fahombiazana avo lenta sy ambany inductance, mitarika fitoniana tena tsara. Poleta vita amin'ny tanana, fitsaboana hafanana ambony. Famafana ny hafanana haingana sy fampisehoana tsara. 3. Coils10 Warps Coil, 32mm Haavo.Fangarony varahina anerobika, tariby varnished. 4. Fitaovana bar42mm, vy malefaka madio ... avo ...